Ithegi: unxweme lwesithathu lwedijithali | Martech Zone
Ithegi: unxweme lwesithathu lwedijithali
IDigital Coast Coast isebenze noReachmail ekuchongeni ezona ndlela zokuziphatha zigqwesileyo kunye nezenzo ezibi kakhulu eziboniswe ngabathengisi be-imeyile. I-infographic bayile ikhonkco lokuziphatha ngakunye nomlinganiswa wenkcubeko wep pop ongalibalekiyo ukunceda abathengisi bakhumbule kwaye badibanise nokuziphatha okungalunganga. Babandakanya neengcebiso ezisebenzayo malunga nokuguqula indlela yokuziphatha engalunganga ibe yinto elungileyo. Ngelishwa, ayinguye wonke umntu ophethe izixhobo zokuthengisa nge-imeyile abazisebenzisa ngokuchanekileyo. Kunokwenzeka ukuba wenza enye okanye nangaphezulu